Ithente engu-10x20Ft (3x6M) yeThempeli le-Duty Puty Party ne-Greenhouse | I-Winsom
19-29 Izingcezu Izingcezu ezingama-30-49
> = 50 Izingcezu
Leli tende lephathi lilungele noma yimiphi imicimbi yangaphandle, efana nemibukiso, imishado, amaphathi, izoso. Ungayifaka futhi egcekeni lakho elingangemuva njenge sunshade enkulu, enhle yokujabulisa umndeni wakho kanye nezivakashi.
1) Uhlaka lwensimbi olucijile, ukugqwala nokumelana nokugqwala.
2) Izinkinobho zentwasahlobo ekuhlanganeni kokusetha okulula nokuthatha phansi
I-3) Isembozo esiphakeme sishisa-kufakwe uphawu, singenamanzi
Inombolo Model WS-P236
Igama lento I-10x20Ft (3x6M) itende lephathi lephathi elisindayo
Umbhalo ongaphezulu 500gsm PVC
Izinto zokubhala 380gsm PVC
Isisindo I-84 KG
10x20ft (3x6m) Umdwebo ojwayelekile
Ilungele imicimbi engaphandle futhi ube nepikinikini nomndeni wakho noma wabelane ngetiye ntambama nabangane bakho.
Ikhwalithi ephezulu, izinsimbi zensimbi enomthwalo osindayo.Rust & corrosion ukumelana nohlaka. Isakhiwo esingunxantathu esiyingqayizivele, okwenza uphahla oluphezulu luzinze kakhulu futhi luqine.
I-100% engangenisi manzi, indwangu yokuvikela i-PVC ye-UV inganikeza umoya omuhle womcimbi wakho ngaphandle. Izindonga eziseceleni nomnyango kungashukunyiswa kalula.
Sisebenzisa izinkinobho zentwasahlobo kanye nensimbi yonyawo kanye nesikhonkwane okwenza itende lihlale liqinile, linempilo futhi liqinile. Ama-tarps amhlophe anikeze izimbobo kusengaphambili ukunamathisela intambo bungee ngokusebenzisa futhi baqiniswa grommets ukuvimbela tarp kusuka ukuqhuma. Izintambo ezihlanganisiwe zilula ukugoqa ngokusebenzisa izimbobo bese zilula izingongolo zensimbi ukuze zivikeleke.
Ikhwalithi ephezulu izesekeli yilezi isiqinisekiso semikhiqizo ebangeni eliphakeme. Esikhundleni sokusebenzisa izesekeli zepulasitiki ezingagugi kakhulu, sisebenzisa izinkinobho zentwasahlobo kanye nensimbi yensimbi nesikhonkwane esihlala isikhathi eside, esinamandla futhi esiqinile.
Esedlule: I-6x12m Heavy Duty PVC Wedding Party Itende Nge-Fire retardant
Olandelayo: I-Canopy Car ephathekayo ephathekayo engangenwa ngamanzi i-10'x20 ′
Amatende Emicimbi Yangaphandle Wholesale 6x12m
I-6x12m heavy Duty Puty Wedding Party Itende Ne-Fi ...